I-Camps Bay Breath of Life - I-Protea Apartment - I-Airbnb
I-Camps Bay Breath of Life - I-Protea Apartment
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-CAMPS BAY Breath Of Life-Protea Apt
U-CAMPS BAY Breath Of Life-Protea Apt Ungumbungazi ovelele
I-Camps Bay Breath of Life - I-Protea Apartment iyifulethi lezitolo elinolwandle oluhlaba umxhwele nokubukwa Kwezintaba Zetafula. Inesimanjemanje, inendawo yayo yokungena, igalaji elizenzakalelayo kanye ne-balcony yangasese ukuze ithamele ilanga. Kungcono ukuphumula futhi ujabulele ubuhle bezintaba zase-Twelve, kanye nokushona kwelanga okumangazayo phezu koLwandlekazi lwe-Atlantic. I-Wifi, i-aircon ne-DSTV ephelele kufakiwe. Iphinde ibe ne-alamu & i-intercom yangasese. Lokhu kulungele abenzi bamaholide kanye nabahambi bebhizinisi/bebhizinisi.
I-Camps Bay Breath of Life - Ifulethi le-Protea liyisitolo esikhulu futhi linolwandle oluhlaba umxhwele nokubukwa kwe-Tablet Mountain. Ihlanganisa i-Wifi, i-DSTV bouquet egcwele (i-satellite), futhi inendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela enegalaji eliphephile, isistimu ye-alamu, i-intercom ne-aircon. Ifulethi linakho konke okudingayo ngeholide lasebhishi, okungukuthi ibhokisi elipholile, ingubo yepikiniki, amalulwane asebhishi. Siphinde sibe namamethi e-yoga, ama-racket e-tennis, ama-squash racket, izinqodlwana zabantwana, umphathi wezinsana wokuqwala izintaba, indlwana nesihlalo sokudla okwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo kakhulu.
I-Camps Bay iyindawo ehamba phambili yezivakashi e-Cape Town, e-South Africa, futhi itholakala kahle oLwandle lwe-Atlantic, phansi kwezintaba zabaPhostoli Abangu-12 futhi iseduze ne-Table Mountain. #
I-CampsBay Camps Bay iyindawo engaphansi kwe-Cape Town, enomuzwa wedolobhana, enikeza indawo elula ngemizuzu engu-15 kuphela yokushayela ukuya enkabeni yedolobha kanye ne-V&A Waterfront, imizuzu engu-30 ukusuka esikhumulweni sezindiza, imizuzu engu-40 ukusuka e-Cape Winelands nemizuzu engu-60 ukusuka e-Cape Point, elungele uhambo lwasemini. I-Camps Bay beachfront iyibanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka efulethini, kodwa-ke i-Uber ilula kakhulu futhi iyathandwa endaweni.
Ibungazwe ngu-CAMPS BAY Breath Of Life-Protea Apt
Sihlala endlini eyinhloko esakhiweni esifanayo futhi siyatholakala ukuba izivakashi zibuze imibuzo njll. Siyalijabulela ikhaya lethu nezindawo ezizungezile ezihlaba umxhwele. Singanikeza ukusikisela okuhle kwezindawo ongazivakashela nezinto ongazenza edolobheni nasezindaweni ezizungezile, ikakhulukazi ama-winelands.
Sihlala endlini eyinhloko esakhiweni esifanayo futhi siyatholakala ukuba izivakashi zibuze imibuzo njll. Siyalijabulela ikhaya lethu nezindawo ezizungezile ezihlaba umxhwele. Singa…
UCAMPS BAY Breath Of Life-Protea Apt Ungumbungazi ovelele